Shina: Mpisolovava Manohana Kandidà Noraràna Tsy Hilatsaka Ho Fidiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jolay 2011 9:27 GMT
Mbola manohy [zh] ny fampielezan-kevitra ataon-dry zareo hilatsaka ho fidiana ao amin'ny Antenimieram-bahoaka ao an-toerana ny olona manerana an'i Shina, saingy mbola mitoetra ho manjavozavo ny hoe ho tonga hatraiza io fiaingàna vaovaon'ny fahatongavan-tsain'ny sivily io.
Nisarika ny sain'ny maro ny tranga niseho tamin'i Liu Ping tao amin'ny faritanin'i Jiangxi taoriana kelin'ny nanakànana an'i Liu sy ireo kandida roa Li Sihua sy Wei Zhongping, tamin'ny fomba isan-karazany, tsy ho kandidà tamin'ny fifidianam-paritra tao Xinyu ny volana lasa teo. Fanampin'ny zavatra nolazain'i kaontin'i Liu Pin ny amin'ny fomba fiasan'ireo manampahefana handraràna azytelo ireo tsy handray anjara amin'ny fifidianana, ilay mpanangon-tsonia Li Sihua dia nanampy tantara kely tao amin'ny bilaogy kiritika [zh]:
Ny 16 Jona, niantso ireo sampan-draharaha misahana ny fifidianana izay ho ao amin'ny Antenimieram-Bahoaka ao amin'ny faritany, ny tanàna ary ny distrika isam-paritra aho ary nanontany azy ireo maika ny heviny momba ny mety ho fahalaniko na tsia amin’ ny maha kandidà vao misandratra ahy ho eo amin'ny toeran'ny solontenan'ny Antenimieram-pirenena entim-bahoaka. Niara-nanamafy ny sampan-draharaha misahana ny tanàna sy ny distrika raha ny toeranaao amin'ny antenimieram-bahoaka dia tsy azo atao ny milatsaka ao amin'ny faritra tsy isoratan'ny tena. Nolazain'ny komity mpiara-mitantana ny fifidianana izay ho ao amin'ny Antenimiera ahy anefa, na izany aza, fa fa mamela ny firotsahan-ko fidiana any ivelan'ny faritra misy ny tena ny Antenimieram-pirenea entim-bahoaka, ary mila mijery ny momba izay miaraa amin-dry zareo aho.
Ny tolakandron'ny 17 Jona, niantso ahy indray ny komity mpiara-mitantana ny fifidianana ka nilaza fa voarainy ny fampakarana nalefako “fax” ary, taorian'ny fandinihana tsara ireo fangatahako ho kandidà ivelan'ny faritra ho solontena ao amin'ny Antenimieram-pirenena entim-bahoaka, dia nalefan'izy ireo ho any amin'ny kongresy ao an-tanànan'i Xinyu izany ary nilazany aho mba hifandray any indray. Ny tale Yi avy ao Xinyu amin'ny departemanta misahana ny fifidianana izay ho ao amin'ny antenimieram-bahoaka nilaza fa voarainy ny dikany araka ny lalàna avy amin'ny Antenimieram-pirenena entim-bahoaka isam-paritra ary ho ekena araka izany.
Ny 17 Jona, taorian'ny fahazoana ny toromarika avy amin'ny Antenimieram-bahoaka ao amin'ny faritra, ny Sekreteran'ny antoko ao Tongzhou sy ilay kandidà napetraky ny CCP-, Xie Qi, izy tenany mihitsy no nandeha tany amin'ny tanànan'i Xihe niaraka tamin'ny olona maro, hanadihady ny lzaina fa “fahamarinana” ao ambadiky ny “fametrahana ahy”. Ireo lohandohan'ny antoko sy mpandray anjara politika vitsisitsy ihany no azon'izy ireo nampanaovina sonia ilay taratasy manamarina fa ny zavatra kendreko voalohany dia tsy ny hilatsaka ho fidiana hiady ho an'ny zon'ny vahoaka amin'ny taniny, fa kosa ny hamaly faty ny tsy rariny nahazo ny tenako. Amin'ny filaza hafa, miteny ve izy fa azon'ny olona atao ny hahazo fanonerana noho ny tsy rariny natao azy raha voafidy ho solontena ao aminn'ny Antenimieram-pirenena entim-bahoaka fotsiny izy ireo?
Jereo ao amin'ny bilaogin'ny Fifidianana tao Shina sy ny Fitantanana ny andinindinin'ny fomba nidarohana an'i Liu, Li ary Wei sy ny nataon'ny manam-pahefana azy ireo nialohan'ny nanesorana azy ireo tsy ho ao anatin'ny fifidianana.
Ny faran'ny volana lasa teo, Wu Yuanshu, ilay mpisolovava an'i Liu Ping, monina ao Hubei, dia niaraka taminy ho any Xinyu hanadihady ny fomba fandrindràna ny fifidianana ary ny nanaovana an'i Liu tamin'io fotoana io. Wu nanoratra [zh] hoe:
Ny 4 Jolay – Androany aho nandeha niaraka tamin'i Liu Ping sy Li Sihua tany amin'ny biraon'i Tonzhou Xihue tao Yushui, ao anatin'ny distrikam-pifidianan'i Li ao amin'ny tanànan'i Xinyu, hijery ny valim-pifidianana sy hitady valiny amin'ilay vono nahazo an'i Liu Ping ary ny halatra finday natao azy, sy ny fanelingelenan'i Wei Zhongping ny fizotry ny fifidianana. Raha vao niditra ilay birao izahay sy Liu Ping dia novonoin'ireo tompon'andraikitry ny birao ary ny findaiko sy ny fankan-tsariko nosintona sy namotika.
Ilay polisy Sheng Qinghui (#050618) avy ao amin'ny komisaria an'i Baoshiu Road nandroaka an'i Liu Ping, nilaza fa nomen'ny fanjakana alalana izy hibaiko an'i Liu, fa tsy ny mifanohitra amin'izay. Hoy izy hoe tsy manana alàlana haka sary azy izahay. Namaly aho hoe nomen'ny fanjakana alàlana izahay hanara-maso fahefanao, ary tsy afaka ny handà izany ianao, ary manan-jo ny haka sary anao aho.
Ny 5 Jolay – omaly maraina tokony ho tamin'ny 8:30 teo ho eo, nandeha nijery ny valim-pifidianana i Liu Ping, Li Sihua ary izaho . Raha iny izahay hiditra ny varavarana iny, mbola tsy nahita ilay valiny akory, nisy olona maro nisintona ny findaiko. Tsy navelako izy ireo fa nanohitra aho ka noratrain'ny mpiasan'ny Xihe, ary potika tamin'izany ny findaiko. Simba tamin'izany koa ny tahirim-peo misy ny fijoroan'olona an-jatony vavolombelona. Natsipiny teny amin'ny tafotrano ilay fakan-tsary ary nikorontana tamin'ny tany ireo antontan-taratasy.
Tao anatin'ny biraon'i Xihe, niteny izy ireo hoe tsy nahzo alàlana avy aminy isika haka sary azy ireo , ary nohitsakitsahantsika ny zon'izy ireo ara-tsary. Hoy aho hoe tsy mila ny fanomezan-dàlan-dry zareo aho. Ary hoy ilay mpiasa iray, “mpisolovava ianareo , nefa minia mandika lalàna? raha maka sary olona iray tsy nahazo alàlana ianareo, hoy izy, manitsaka ny zony ianareo izany. Ny fanitsahana ny zo ara-tsary dia amin'ny resaka lalàna ara-barotra, hoy aho: Hita izao fa novonoinareo izahay ary voaporofo mazava be ny amin'izany, tena matotra ve ny filazanareo fa nanitsaka ny zonareo ara-tsary izahay ?”
Koa satria mbola teny amin'ny tafo ilay fakan-tsary, nangataka aho ny mba ny haka sary ihany izahay, ho porofo. Nandà ilay mpitandro ny filaminana, ary tsy nety niala teo koa aho. Namela anay haka sary ihany izy avy eo, ary dia naka sary azy sy ny fiaran'izy ireo aho[…]
Nandeha fiarakaretsaka aho nody tany Xinyu ary niresaka tamin'ilay mpamily mandra-pahatonga tany. Nanontany azy aho raha fa naheno momba an'i Liu Ping izy. Hoy izy hoe tsia. Hoy aho hoe ny eran'ny firenena mahafantatra an'i Liu Ping daholo, ilay kandidà, ho solontena ao amin'ny Antenimieram-pirenena entim-bahoaka, ahoana no tsy ahafantaranao azy? Nieritreritra kely izy, ary nilaza hoe : oadray, marina izany, efa henoko, mpampihorohoro na tahaka izany, saika napoakany ilay fivarotana lehibe indrindra an'i Xinyu ny andron'ny fifidianana. Feno polisy mitam-piadiana ny arabe. Ketraka aho. Telo andro fotsiny aho no tao Xinyu dia efa naheno izany resaka fampihorohoroana izany.
Taorian'ny niverenana tao Hubei ny 5 Jolay, nanoratra i Wu tao amin'ny kaontiny Weibo fa hanosika ny ministeran'ny fitsarana hanao fanadihadiana lalina, ary koa hitady miaraka amin'ny mpisolovavan'i Li Zhiming ao Guangdong sy ny an'i Zhejiang Wang Cheng, hamory mpisolovava hafa handeha ho any Xinyu mba hanampy ireo kandida telo hafa teo aloha.
Ny ampitson'io Wu dia voaasa taminà fiaraha-misotro dite ary nilazàna [zh] fa tokony hajanony io fihezahany hanangona mpisolovava hanao fanadihadiana ny fifidianana ny ho ao amin'ny Antenimieram-bahoaka vao avy natao tao Xinyu io. Vondrona iray ao amin'ny Weibo natsangan'ireo mpandàla ny fifidianana ara-demaokratika tarihan'ny naman'ilay mpisolovava an'i Wu, Wang Cheng, nefa no mbola tena miasa be ho amin'io tanjona io.
Mandritra izany, ny sasany amin'ireo fampielezam-baovao Sinoa dia manohy manoratra momba ilay resabe tsy mitsaha-mitombo momba ny fifidianana izay ho mpikambana ao amin'ny antenimeran'ny distrika: Tsy ela akory izay, nandefa matoan-dahatsoratra roa be mpamaky i Caijing , ‘ Ny fanontaniana tena sarotra mikasika ny fahaiza-manaon'ny kandidà tsy miankina mba hanenàna ny fifandirana ara-tsosialy‘ ary ny ‘fomba fahitana ny fiakaran'ireo kandidà olon-tsotra‘.
Matoan-dahatsoratra lava be iray avy amin'ny The World and China Institute vondrom-pikarohana iray momba ny rafi-pifidianana, ‘‘N'aiza n'aiza, maro ireo kandidà tsy miankina maniry mafy ny ho lasa solontena ao amin'ny Antenimieram-pirenena Entim-bahoaka‘.